Isinikezeli Sezezimali ze-Forex | Yini i-Margin ne-Thola ku-Forex, Funda nge-FXCC
I-Forex Leverage & Margin
Bonke abathengisi basebenzisa izimali ezibolekwe ngandlela thile ukukhulisa ukubuya okungenzeka kutshalomali. Abatshalizimali bavame ukusebenzisa ama-akhawunti we-margin lapho befuna ukutshala imali kumasheya noma ezimali, besebenzisa imali "ebolekwe" kumthengisi ukuze balawule indawo enkulu eqala ngemali encane.
Ngakho-ke bangabeka engcupheni idiphozi encane uma kuqhathaniswa kodwa bathenge okuningi, obekungeke kutholakale kubo. Umugqa we-Forex uyisihloko esibalulekile kubathengisi bama-novice. Ngakho-ke, siphakamisa ukuthi singene kwi-Forex bese sithola konke ngokuningiliziwe.
Uyini umugqa we-Forex ngamagama alula?
Uma ungangeni emininingwaneni, umkhawulo we-Forex umane nje isilinganiso sokuthenga amandla umhlinzeki akuhlinzeka ngokukhokha idiphozi yakho.
Ukuhweba kweMargin kuvumela abathengisi ukuthi bandise ubukhulu besikhundla sabo sokuqala. Kepha akumele sikhohlwe ukuthi le yinkemba esika nhlangothi zombili, ngoba yandisa inzuzo kanye nokulahlekelwa. Uma isibikezelo sentengo singahambi kahle, i-akhawunti ye-Forex izongena ize ngokuphazima kweso ngoba sithengisa ivolumu enkulu.
Kungani umugqa ubalulekile kubadayisi be-Forex?
Abahwebi kufanele banake umkhawulo we-Forex ngoba lokhu kubatshela ukuthi banemali eyanele yini yokuvula ezinye izikhundla noma cha.
Ukuqonda okungcono komugqa kubaluleke kakhulu kubathengisi ngenkathi bengena ekuhwebelaneni kwe-Forex okuthengisiwe. Kubalulekile ukuqonda ukuthi ukuhweba kumugqa kunamandla aphezulu wenzuzo nokulahleka. Ngakho-ke, abathengisi kufanele bazijwayeze umkhawulo namagama ahambisana nawo njengamakholi wekhasi, izinga lemajini, njll.
Lithini izinga lemajini?
Izinga lemajini yiphesenti lemali yakho oyifakile esivele isetshenziselwa ukuhweba. Kuzokusiza ukuthi ubone ukuthi isetshenziswa malini imali nokuthi kusele malini ukuze uqhubeke nokuhweba.
Uyini umkhawulo wamahhala ku-Forex?
Imajini yamahhala amandla okuthenga atholakalayo okuhweba. Imajini yamahhala ibalwa njengokukhipha imajini esetshenzisiwe kusuka kumugqa ophelele.
Isibonelo semahhala samahhala
Ake sithi ngine- $ 8000 kubhalansi yami. Ekuhwebeni okuvulekile, kubolekwa u- $ 2500. Umkhawulo wamahhala ngu- $ 8000 - $ 2500 = $ 5500. Uma uzama ukuvula idili engenamali eyanele yamahhala, i-oda lizokhanselwa ngokuzenzekelayo.
Ukuxhuma kanye nomugqa kuhlobene kanjani?
Ukusizakala kanye nomugqa kuyizinhlangothi ezimbili zemali efanayo. Uma imajini iyinani elincane elidingekayo ukubeka ukuhweba okunesilinganiso, khona-ke amandla wokusebenzisa ayithuluzi elivumela umhwebi ukuthi ahambise inkatho enkulu engeke ithengeke kuye ngemali engu-1: 1. iyatholakala lapho usebenzisa i-akhawunti ye-Forex margin. "Isimeli" sangempela sokwenza umehluko phakathi kwalokho esinakho nalokho esifuna ukukusebenzisa.
Ukusetshenziswa kuvame ukuvezwa kufomethi "X: 1".
Ngakho-ke, ngifuna ukuhweba okuningi okujwayelekile kwe-USD / JPY ngaphandle komugqa. Ngidinga ama- $ 100,000 ku-akhawunti yami. Kepha uma isidingo semajini siyi-1% kuphela, ngidinga kuphela i- $ 1000 kwidiphozi. Isilinganiso, kulokhu, singu-100: 1.
Nge-1: I-1 ithola wonke amadola kulawulo lakho lwe-akhawunti ye-margin I-1 dollar yokuhweba
Nge-1: I-50 ithola wonke amadola kulawulo lakho lwe-akhawunti ye-margin I-50 dollar yokuhweba
Nge-1: I-100 ithola wonke amadola kulawulo lakho lwe-akhawunti ye-margin I-100 dollar yokuhweba
Luyini ucingo lwemajini, nokuthi ungalugwema kanjani?
Ucingo lwemajini yilokho okwenzekayo lapho umhwebi ephelelwa umkhawulo wamahhala. Uma kunemali encane ebekiwe kunaleyo edingekayo ngaphansi kwemigomo yokusizakala, ukuhweba okuvulekile ku-Forex kuvalwa ngokuzenzakalela. Le yindlela evimbela ukulahleka futhi abahwebi abalahlekelwa ngaphezu kwemali abayifakile. Abahwebi bangagwema ukubizwa kwe-margin uma besebenzisa umugqa ngokuhlakanipha. Kufanele banciphise usayizi wesikhundla sabo ngokuya ngosayizi we-akhawunti yabo.
Ungawuthola kanjani umugqa ku-terminal ye-MT4?
Ungabona imajini, imajini yamahhala kanye nezinga lemajini ewindini lokugcina le-akhawunti. Leli iwindi elifanayo lapho kukhonjiswa khona ibhalansi yakho nokulingana.
Kubalwa inani eliphakeme lokuhweba kwe-margin
Usayizi ojwayelekile we-Forex lot amayunithi wemali ayi-100,000. Ngesilinganiso esingu-100: 1, yonke imali engu- $ 1000 efakwa ku-akhawunti yokuhweba ikunika amandla okuthenga ama- $ 100,000. Umthengisi uvumela abahwebi ukuthi balahle lezi zinkulungwane eziyikhulu, kuyilapho kukhona izinkulungwane zangempela kwidiphozi.
Isibonelo, uma sizothenga amayunithi wemali ayi-10,000 ku-1.26484 ngesilinganiso esingu-400: 1, sizothola okungaphezulu kokungu- $ 31 komugqa odingekayo. Lesi yisibambiso esincane kakhulu sokuvula ukuhwebelana nge-Forex.
Isibonelo sokuhweba komkhawulo
Ake sithi umhwebi uvula i-akhawunti kumthengisi esebenzisa amandla we-1: 100. Uthatha isinqumo sokuhweba i-EUR / USD pair pair; okungukuthi, uthenga ngama-euro ngedola laseMelika. Intengo ingu-1.1000, kanti inkatho ejwayelekile ingu- € 100,000. Ekuhwebeni okujwayelekile, kuzodingeka afake i-100,000 ku-akhawunti yakhe ukuvula ukuhweba. Kepha ukuhweba ngesilinganiso se-1: 100, ufaka kuphela u- $ 1000 ku-akhawunti yakhe.
Ebikezela ukukhuphuka noma ukwehla kwentengo, uvula ukuhweba okude noma okufushane. Uma intengo ihamba kahle, umhwebi uzokwenza inzuzo. Uma kungenjalo, ukwehla kungadlula idiphozi yakho. Isivumelwano sizovala, umhwebi uzolahlekelwa yimali.
Vele, ukuhweba ngomugqa kuyithuluzi eliwusizo kulabo abafuna ukuhweba nge-Forex ngemali elinganiselwe yokuqalisa. Uma kusetshenziswe kahle, ukuhweba okuthengisiwe kuthuthukisa ukukhula kwenzuzo okusheshayo futhi kunikeza indawo eningi yokuhlukahluka kwephothifoliyo.
Le ndlela yokuhweba nayo ingakhuphula ukulahleka futhi ibandakanye izingozi ezingeziwe. Ngakho-ke, siphetha ngokuthi kunzima ukungena emakethe yangempela ngaphandle kokwazi izici ze-Forex.
Ingozi yokulahlekelwa yonke imali iphezulu kakhulu. Ngokuqondene nama-cryptocurrensets nezinye izinsimbi eziguquguqukayo, njengezinsimbi, abathengisi abanolwazi kuphela ngokuvamile abanamazinga amahle nezibalo eziphumelelayo abangangena lapha.
Ngendlela, kuzoba mnandi ukwazi ukuthi uyayithanda yini i-Forex, uma uthanda ukuhweba ngezimali ezixutshiwe, futhi siyini isilinganiso sakho osithandayo.